Ho avy ny krismasy 2020… – FJKM Ambavahadimitafo Ho avy ny krismasy 2020… |
« Koa mahereza sy mahatanjaha, aza matahotra ny mivadi-po fa omba anao ny Tompo Andriamanitrao amin’izay rehetra alehanao. »
Finaritra isika satria ho avy ny krismasy. Tena fotoan-dehibe ho antsika kristiana tokoa izany satria hankalazantsika an’Andriamanitra noho ny fahatongavan’ny Tenin’Andriamanitra tonga nofo tamin’ny alàlan’i Jesoa Kristy.
Hafa mihitsy izany fiangonana mankalaza an’Andriamanitra amin’ny krismasy izany, ary misy fahabangàna izany fiangonana tsy mankalaza an’Andriamanitra @ Krismasy izany. Mety ny fomba fanatanterahantsika azy no mety miova arakaraky ny zava-mitranga, fa ny krismasy dia fotoan-dehibe ho antsika mpino.
Koa mampahery antsika mpanabe rehetra amin’ny fikarakarana krismasy, mampahery ny ray aman-dreny ihany koa tsy hanana fanahiana amin’ny fandefasana ny zanatsika, mampahery ny ankizy, tanora, lehibe ny amin’ny fiarahantsika mientana manome voninahitra an’Andriamanitra noho ny krismasy satria endriky ny fitoriana filazantsara izany.